Courgettes सजिलै हुन् भनेर तयार गाह्रो छैन digestible र उपयोगी तरकारी हो। Zucchini स्वादिष्ट व्यञ्जन विभिन्न पकाउन। तपाईं, उदाहरणका लागि, भुटेको zucchini पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई यसको आफ्नै तरिका मा एक पकवान तयार: कसैले मोटा स्लाइस, कसैले प्रेम - अरूलाई पीठो पाप्रो रुचि गर्दा, पतली, केही तला चिप्स रूपमा zucchini।
लसुन र डिल संग तला zucchini नुस्खा - र तिमी एक अद्भुत खाजा तयार गर्न सक्नुहुन्छ। नाश्ता तातो र चिसो सेवा गर्दै छन्, तर तपाईं रोटी पातलो स्लाइस मा राख्न सक्नुहुन्छ। यो अद्भुत पकवान को तयारी को लागि तपाईं दुई zucchini, ताजा डिल, frying लागि लसुन, नुन र वनस्पति तेल को दुई लौंग लिनु आवश्यक छ।
नुस्खा तला zucchini, लसुन, धोए zucchini, एक तौलिया संग सुकेको र पातलो स्लाइस मा कटौती खाना पकाउने अघि। तेल गंदा एक कराइ गरम र browned सम्म zucchini तलना। Zucchini बारेमा एक मिनेट लागि प्रत्येक पक्ष तलना। नुन तला zucchini छ आवश्यक छ।
एक प्लेट zucchini तहहरू बाहिर राख्नु मा, तिनीहरूलाई चोट लसुन र कटा डिल खन्याउन। माथिबाट, तपाईं खट्टा क्रीम वा मेयोनेज राख्न सक्नुहुन्छ। तारेको zucchini लसुन र डिल संग नुस्खा - पुरानो पकवान, आफ्नो बाल्यकाल देखि धेरै थाह।
लसुन सस बनाउन सक्छ स्क्वास गर्न। लसुन को 3-5 लौंग, दही र डिल को आधा कप: यो खाना पकाउनु तपाईं निम्न सामाग्री आवश्यक छ। लसुन नुन संग rubbed र दही संग मिश्रण। लसुन को ठूलो टुक्रा हटाउन पर्छ। चटनी, सूक्ष्मता कटा डिल थपिएको थियो भड्काए र zucchini फैलाउन जो एक ठूलो प्लेट, मा हालिएको। ताजा जडीबुटी संग छर्कियो र सेवा तला zucchini माथि।
धेरै छिटो र सजिलो संग भुटेको zucchini नुस्खा खाना पकाउनु लसुन सस। यो पकवान 10 मिनेट लाग्नेछ तयार। यसको तयारी लागि zucchini, पीठो, नुन, frying लागि मरिच र वनस्पति तेल चाहिन्छ। चटनी को तयारी को लागि लसुन को2लौंग, मेयोनेज, नुन, भूमि मरिच 40 ग्राम लिनुपर्छ।
2 मिमी मोटाइ को पातलो स्लाइस मा कटौती Zucchini, मरिच र नुन आवश्यकता हो, र त्यसपछि पीठो मा रोल, एक राम्रो गरम पैन र भुट्नु धारण प्रत्येक पक्षमा सुनको खैरो सम्म। लसुन को चटनी तयार गर्न प्रेस पास र मेयोनेज, मरिच र नुन संग मिश्रण गर्न आवश्यक। zucchini प्रत्येक तह चिकनाना यो सस। माथि वर्णन गरिएको छ जो तालिका, तला zucchini नुस्खा मा सेवा गर्नु अघि, तिनीहरूले सस र लसुन को स्वाद अप भिजेको एउटा गर्दा लागि खडा छ।
र तपाईं zucchini व्यञ्जनहरु को स्वादिष्ट रोल यो चमत्कारी तरकारी साधारण अंतर रहन्थ्यो देखि खाना पकाउन सक्छ - त्यहाँ के छ! अन्डा क्रीम संग रोल लागि frying, नुन, मरिच र जडीबुटी लागि दुई zucchini, दुई, अन्डा, लसुन एक ल्वाड़, दुई चमचा चमचा मेयोनेज, कोरियाली मा गाजर को 50 ग्राम, तेल लिन आवश्यक छ।
यो पकवान को तयारी स्पेयर समय, शुद्धता र रचनात्मक उत्साह को एक बिट आवश्यक छ। पातलो स्लाइस मा कटा पहिलो भुट्नु zucchini वनस्पति तेल - पकाउने पूरा सम्म। zucchini frying पछि प्लास्टिक ग्लास अतिरिक्त तेल, एक नैपकिन बाहिर राख्नु आवश्यक छ। अब अन्डा क्रीम तयार। यो अन्त गर्न, हार्ड-उसिनेर र खुली अन्डा, लसुन एक ब्लेंडर मा पिस्नु गर्न मेयोनेज, नुन र मरिच थप्न आवश्यक छ।
अब तपाईं कोरियाली गाजर साथ सँगै हुन सक्छ, तला zucchini प्लास्टिक मा क्रीम राख्न सक्नुहुन्छ। प्लास्टिक अब साग एक प्लेट र garnish मा रोल र स्थान मा लुढका गर्न सकिन्छ। अन्डा क्रीम संग zucchini सबै रोल तयार छ।
प्रचण्ड स्क्वास मूल र स्वादिष्ट व्यञ्जन एक विस्तृत विविधता को तयारी को लागि धेरै रोचक हुन सक्छ, तर धेरै आश्चर्य यस्तो छ कि: यो साँच्चै हो - zucchini?
घरमा स्ट्यु चिकन: को नुस्खा र लाभ
VAZ-2112 (16 वाल्व)। मरम्मत र रखरखाव, मालिकको समीक्षा
संसारका सबै भन्दा उत्कृष्ट निर्देशकहरू - यो शानदार मानिसहरू को हुन्?
अपार्टमेंट को cadastral मान। बजार र घर को cadastral मूल्य
व्यक्ति को अभिमुखीकरण
चिनी बिना एक सरल कुकी नुस्खा